Toban qof ayaa ku dhaawacantay israsaaseyn ka dhacday Tareenka Rakaabka ee Tokyo
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Crime » Toban qof ayaa ku dhaawacantay israsaaseyn ka dhacday Tareenka Rakaabka ee Tokyo
Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Crime • Wararka Jaban ee Japan • News • Safarka Tareenka • Waajib ah • Ammaanka • Dalxiiska • Gaadiidka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka kala duwan
Toban qof ayaa ku dhaawacmay Rasaasta istaagtay ee tareenka rakaabka ee Tokyo
Dhacdadan ayaa khal -khal weyn ku abuurtay waddada tareenka Odakyu, iyada oo hawlihii la joojiyay kor iyo hoosna laga soo qaaday labada saldhig ee ay dhibaatadu saameysey.
Nin mindi wata ayaa toorri ku galay tareenka Tokyo.
Weerarka ayaa ka dhacay khadka Tareenka Korontada Odakyu goor dambe oo Jimcihii ah.
Mid ka mid ah dhibbanayaasha ayaa si xun u dhaawacmay ka dib markii dhowr jeer mindi lala dhacay.
Nin ayaa ku jira gacanta booliska caawa kadib markii uu a mindi mindi ku taagay Tokyo Odakyu Electric Railway line tareenka raaca.
Ugu yaraan toban qof ayaa ku dhaawacmay weerarka oo dhacay goor dambe oo Jimcihii ah Tokyoxaafada koonfur -galbeed ee Setagaya.
Toban qof ayaa ku dhaawacantay toorey lagu weeraray tareenka rakaabka ee Tokyo
In kasta oo warar horudhac ahi tilmaamayaan in afar qof ay ku dhaawacmeen weerarka, haddana tirada ayaa markii dambe gaartay toban dhibane, sida ay sheegtay warbaahinta maxalliga ah oo soo xiganaysa waaxda dab -damiska ee Setagaya.
Waaxda Dab -demiska Tokyo ayaa sheegtay in sagaal ka mid ah 10 -kii rakaab ee dhaawacmay la geeyay isbitaallada ku dhow, halka kan 10 -aadna ay u suurogashay inuu iska socdo. Dhammaan dadka dhaawacmay ayaa miyir qabay, sida ay sheegeen saraakiisha waaxda dab damiska.
Mid ka mid ah dhibanayaasha ayaa si xun u dhaawacmay kadib markii dhowr jeer tooreey lagu dhuftay, warbaahinta maxalliga ah ayaa werisay iyagoo soo xiganaya ilo boolis.
Isla markii dhacdadu dhacday, tareenku wuxuu istaagay inta u dhaxaysa laba saldhig, iyada oo la tuhunsan yahay in la tuhunsan yahay uu ka booday oo uu ka baxsaday lugta. Illaa hadda ma cadda cidda jiidday bareega deg -degga ah ee tareenka.
Eedeysanaha ayaa ka baxsaday tareenka, isagoo ka tagay mindiisii ​​iyo taleefankii gacanta.
Dhacdadan ayaa dhalisay ugaarsiga, iyada oo nin la tuhunsan yahay, uu ku jiro 20 -meeyadii, ugu dambayntiina ay boolisku xidheen ka dib markii uu isku dhiibay dukaan ku habboon oo u dhow, isaga oo u sheegay maareeyaha in uu ahaa kii gaystay weerarka. Illaa iyo hadda lama garanayo sababaha weerarka geystay.
Dambiyada rabshadaha wata ayaa aad ugu yar Japan, weerarkuna wuxuu ku soo beegmayaa iyadoo caasimadda la geliyey feejignaan dhanka amniga ah maadaama ay martigelinayso Ciyaaraha Olombikada.
Oktoobar 20, 2021 at 13: 39
Oktoobar 20, 2021 at 13: 25